သတင်း - သဲနှင့်ကျောက်စရစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်
သဲနှင့်ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်သဲထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းနှင့်သဲထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတစ်ပြိုင်နက်တည်းသဲနှင့်ကျောက်များကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ သဲနှင့်ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ပစ္စည်းကိရိယာအစုံအလင်သည်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သဲနှင့်ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုကိုအထူးပြုသည့်ကိရိယာများပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်၊ သတ္တု၊ ထုံးကျောက်၊ basalt၊ granite၊ pebble၊ မြစ်ကျောက်စသည်များအားလုံးကိုဆောက်လုပ်ရေးသဲနှင့်ကျောက်ခဲများဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ယူနီဖောင်းအမှုန်အရွယ်အစား၊ ပုံမှန်ပုံသဏ္andန်နှင့်မြင့်မားသော compressive strength တို့နှင့် ပို၍ ညီသည်။ သဘာဝသဲများနှင့်ကျောက်များထက်အဆောက်အုံလိုအပ်ချက်နှင့်အတူအဆောက်အအုံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
သတ္တုမာကျောမှုကွာခြားချက်အရသဲနှင့်ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုအလယ်အလတ်ကျိုးထားသောသဲနှင့်ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (၆ ထက်ပိုကြီးသော Mohs မာကျောမှု) နှင့်မူလကျိုးထားသောသဲနှင့်ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။
ဆင့်ပွားသဲနှင့်ကျောက်စရစ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်အကြမ်းအားဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (silo) အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များ စက်များကိုခါးပတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးသတ်မှတ်ချက်အသီးသီး၏ပြီးစီးသောသဲနှင့်ကျောက်စရစ်များကိုစက်ဝိုင်းတုန်ခါမှုမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှတဖြည်းဖြည်းထုတ်လုပ်သည်။
တုန်ခါသောစုပ်စက်ဖြင့်ကြမ်းကြိတ်ခွဲရန်မေးရိုးကိုကြိတ်စက်သို့အညီအမျှပို့ဆောင်သည်။ ကြမ်းတမ်းသောကျိုးပဲ့နေသောပစ္စည်းများကိုခါးပတ် conveyor ဖြင့်ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ပုံသွင်းရန် impact crusher သို့ပေးပို့ပြီးစစ်ဆေးရန်တုန်ခါနေသောမျက်နှာပြင်သို့ပို့ဆောင်သည်။ ကုန်ချော၏အမှုန်အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီသောပစ္စည်းများသည်သန့်စင်ရန်အချောထည်ဧရိယာ (ကျောက်) သို့မဟုတ်ဘီးပုံးသဲလျှော်စက်သို့အသီးသီးသယ်ယူပို့ဆောင်သည်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်အချောထုတ်ကုန်သည်အချောထည်ထုတ်ပိုးသောခါးပတ်ဖြင့်ပြီးစီးသည်။ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသဲ၊ သဲအဝတ်လျှော်စက်မှထုတ်လွှတ်သောရေဆိုးထဲတွင်ဆုံးရှုံးသွားသောသဲအချို့ရှိသည်။ ကောင်းမွန်သောသဲပြန်လည်ဆယ်ယူရန်အဆုံးတွင်ကောင်းမွန်သောသဲပြန်လည်ဆယ်စက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးအချောစက်ကိုသဲလုပ်ခြင်းဖြင့်အချောထည်စက်ဖြင့်သဲဧရိယာသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ ခါးပတ်; စိစစ်ပြီးနောက်ကုန်ချော၏အမှုန်အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောပစ္စည်းများ (တုန်ခါနေသောမျက်နှာပြင်မှပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်သဲလုပ်စက်သို့ပြန်သွားသည်။ ကုန်ချောထုတ်ကုန်များ၏အသေးအဖွဲကိုသုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များအရပေါင်းစပ်။ အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါကကြမ်းနှင့်အချောမှုန့်ခွဲစက်နှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာများကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
သဲနှင့်ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုကိုအဓိကကြိတ်ခွဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (silo)- တုန်ခါစေသောအရာ- လေးလံသော hammer crusher- စက်ဝိုင်းတုန်ခါမှုမျက်နှာပြင်- သဲလုပ်စက်- ဘီးသံပုံးသဲလျှော်စက်- သဲကောင်းကောင်းပြန်လည်ရယူခြင်း- ပြီးစီးခြင်း ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး၏သတ်မှတ်ချက်များ စက်များကိုခါးပတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးသတ်မှတ်ချက်အသီးသီး၏ပြီးစီးသောသဲနှင့်ကျောက်များကိုစက်ဝိုင်းတုန်ခါမှုမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှတဖြည်းဖြည်းထုတ်လုပ်သည်။
တုန်ခါနေသော feeder အားလေးလံသော hammer crusher ကိုအညီအမျှကျွေးသည်။ ကြိတ်ခွဲပြီးသည်နှင့်ပစ္စည်းများကိုစိစစ်ရန်ပတ် ၀ န်းကျင်တုန်ခါမှုမျက်နှာပြင်သို့စေလွှတ်သည်။ အချောထည်ထုတ်ကုန်၏အမှုန်အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောပစ္စည်းများကိုသန့်စင်ရန်အချောထည်ဧရိယာ (ကျောက်) သို့မဟုတ်ဘီးသံပုံး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်အချောထည်လုပ်သောသဲကိုသားရေခါးပတ် conveyor ဖြင့်အချောထည်ထုတ်ကုန်သို့ပို့ဆောင်သည်။ ကောင်းမွန်သောသဲပြန်လည်ဆယ်ယူရန်အဆုံးတွင်ကောင်းမွန်သောသဲပြန်လည်ဆယ်စက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးအချောစက်ကိုသဲလုပ်ခြင်းဖြင့်အချောထည်စက်ဖြင့်သဲဧရိယာသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ ခါးပတ်; စိစစ်ပြီးနောက်ကုန်ချော၏အမှုန်အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောပစ္စည်းများ (တုန်ခါနေသောမျက်နှာပြင်မှပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်သဲလုပ်စက်သို့ပြန်သွားသည်။ ကုန်ချောထုတ်ကုန်များ၏အသေးအဖွဲကိုသုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များအရပေါင်းစပ်။ အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါကကြမ်းနှင့်အချောမှုန့်ခွဲစက်နှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာများကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
1. * စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ သဲနှင့်ကျောက်စရစ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်မြင့်မားသောအလိုအလျောက်၊ လည်ပတ်မှုစရိတ်နည်းခြင်း၊ မြင့်မားသောကြိတ်ချေနှုန်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ကြီးမားသောအထွက်၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်ရိုးရှင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့တွင်အားသာချက်များရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သောသဲသည်အမျိုးသားဆောက်လုပ်ရေးသဲစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထုတ်ကုန်တွင်တူညီသောအမှုန်အရွယ်အစား၊ ကောင်းမွန်သောအမှုန်သဏ္ာန်နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအဆင့်များရှိသည်။
၂။ အဆင့်မြင့်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက် စက်ပစ္စည်းများစတင်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ အစာကျွေးခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင်သဲနှင့်ကျောက်စရစ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်လက်ဖြင့်လည်ပတ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု၊ လည်ပတ်မှုစရိတ်နည်းခြင်း၊ ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုနှင့် ၀ င်ငွေမြင့်မားခြင်းတို့၏အားသာချက်များရှိသည်။ အချောထည်ကျောက်တုံးသည်အမျိုးသားမြန်နှုန်းမြင့်ပစ္စည်းများလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်ဖက်ညီသောအမှုန်အရွယ်အစားနှင့်ကောင်းမွန်သောအမှုန်ပုံသဏ္န်ရှိသည်။
3. အဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေး။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပုံစံ၏ဒီဇိုင်းတွင်အဆင့်အားလုံး၌ကြေမွပစ္စည်းများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကိုက်ညီမှုနှင့်တင်းကျပ်သောမြေပြင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပုံစံတို့ကြောင့်ကြမ်းပြင်ဧရိယာသေးငယ်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်မြင့်မားခြင်း၊ သဲနှင့်ကျောက်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အမှုန့် တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းသည်ချောမွေ့သောထုတ်လွှတ်မှု၊ စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှု၊ အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှုနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာမှုတို့ကိုသေချာစေရန်အဆင့်မြင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။